Mpanamboatra izahay, fa tsy mpanelanelana.
Hebei Besttone Fashion Co., Ltd. miorina ao Shijiazhuang, renivohitry ny faritanin'i Hebei, 280km miala an'i Beijing. Manana mpiasa mivantana izahay: 520 Ampianaro mpiasa: Fizarana fanapahana 30: 15 Famaranana: 25 fonosana: 30.
iSIKA tsy vitan'ny manana ny ozininay manokana fa miasa miaraka amin'ny ozinina maro ihany koa.Manana famoahana goavana 150,000 mitambatra isam-bolana izahay. Noho izany, tena matanjaka amin'ny famokarana izahay, afaka mahazo antoka izahay raha omenao ny kaomandinao.
Manomboka amin'ny fanapahana, ny famokarana ka hatramin'ny orinasa famonosana entana dia manana ny fitaovana entiny manokana. Izao dia hasehoko anao ny fitaovanay hanome anao fahalalana bebe kokoa momba anay.
Voalohany indrindra, manana fitaovana fanapahana lamba mandeha ho azy isika izay afaka manapaka lamba mahazatra, faharoa, manana milina fanapahana jiro mandeha ho azy isika, ny tombony azony dia ny tsy fisian'ny tsindry mekanika amin'ny fitaovana, noho izany dia tsy hiteraka fahasimbana noho ny tsindry tafahoatra. .Ho an'ny endrika sarotra, dia azo hokapaina tsara ihany koa izy mba hahazoana antoka ny haben'ny fitaovana ary hampitombo ny famoronana ny akanjo.
Ny karazana modely rehetra sy ny milina manokana izay manamora ny fifampiraharahana amin'ny karazan-tsipika amin'ny akanjo, tsy vitan'ny fanatsarana ny fahaizan'ny zaitra fa fanatsarana ny hakanton'ilay vokatra. template.
Ny karazana milina isan-karazany dia ahafahantsika manao karazany maro kokoa, toy izany palitao / palitao maivana, palitao / palitao, volom-borona / palitao sns.
Ny fanindriana sy ny famonosana ary ny lozisialy dia tena matihanina. Afaka manome antoka ny fahatongavan'ny entanao any amin'ny toerana voatondro izy.